Ungaphrinta kanjani itafula le-Excel kahle - Izeluleko - I-Teches RELAY
Accueil » AMACEBISO Ungaphrinta kanjani ithebula le-Excel kahle - Izeluleko
Ungaphrinta kanjani ithebula le-Excel kahle - Izeluleko
Uma usuvele uprinte ispredishithi Excel esikhathini esidlule, khona-ke uyazi ukuthi ukuthola itafula likhulu kakhulu kwiphepha elilodwa kwesinye isikhathi kuyisimangaliso. Futhi esikhathini esiningi, sishiywa ngamashidi ambalwa aphrintiwe okufanele aqoqwe. Ayisebenzi ngempela kepha, U-Excel uxazulula le nkinga ngokuchofoza okumbalwa ngokushintshwa okumbalwa kwesilinganiso sokuphrinta. Isu elizoguqula umbono wakho we-Excel!
Ungaphrinta kanjani ispredishithi sakho ekhasini elilodwa
Qala ngokuvula ifayela ofuna ukuliphrinta. Kumenyu yeribhoni, chofoza kuthebhu yefayela.
Ewindini elisanda kuvulwa, chofoza inkinobho yokuphrinta kubha yemenyu eseceleni. Ungangena kuyo ngokushesha ngesinqamuleli sekhibhodi Ctrl + P. Bese, ekhasini elisanda kuvula, cindezela indawo yokuxhumanisa ngezansi.
Ibhokisi lengxoxo yokusethwa Kwekhasi lizovulwa. Kuthebhu yokuqala yekhasi, evula ngokuzenzakalelayo, phawula inketho yokuLungisa engxenyeni ye-Scale, ngenkathi ushiya ububanzi bekhasi le-1 ekhasini le-1 le-hauteur. Uma itafula lakho linamakholomu amaningi kunezintambo, ungakhetha kahle i-Landscape engxenyeni ye-Oriuction.
Bese uchofoza kuthebhu yama-Margins, futhi chlola izinketho ngokulingene nangokuqondile engxenyeni Isikhungo ekhasini. Futhi unganciphisa amashiyitha ukuze ugcine isikhala ekhasini lokuphrinta.
Bese ucindezela OK ukubuyela kusigaba sokuphrinta. Kuzovela kuqala idokhumenti yakho futhi uzokwazi ukuphrinta uma wenelisekile ngomphumela.
Uma ukuhleleka okuhle kungakwesabisi, yazi lokho futhi ungabeka ukwakheka kusuka kuthebhu Yezakhiwo ezinikezele kwimenyu yeRibbon.
Buza umbuzo wakho
Lesi sihloko sivele kuqala TLC
Nakhu ukuthi wehlisa kanjani isisindo ngokwemvelo ngaphandle kokudla - IMPILO YEMPILO YEMPILO
Khetha isono osithandayo bese uthola ukuthi kwembulani ngobuntu bakho obufihliwe - ISANTE PLUS MAG
I-ASSE: I-Puel iqinisekisa lokhu kusuka kwesikhashana ku-mercato - FOOT 01
Ukuthengiswa kwasekuqaleni kweLwesihlanu Elimnyama kunciphisa ukunwetshwa kwe-Wi-Fi kwe-TP-Link kwe-Ultra-okusheshayo kwe-X -UMX ku-19 $ - BGR
Isimo se-endgame esisusiwe ebesifisa ukubona ukuphunyuka - BGR
IZITHOMBE. UKaty Perry wenza ukubukeka okungavamile eceleni kukadadewabo omdala u-Angela Hudson ku-
I-Royal snub: Kungani u-Edward wayeyinkosana yokuqala kusukela ngezikhathi zikaTudor ukunikezwa isihloko esiphansi
I-Cameroon - Izipesheli Zomsebenzi299
ABANTU & LIFESTYLE7,367
I-TECH & ITELECOM2,571